"Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Salamo 32:1 … tahaka ny namelan’Andriamanitra ny helokareo ao amin’i Kristy." Efesiana 4:32
Ny hoe «Azafady!... Miala tsiny!» dia fomba fiteny fampiasa anehoana fahalalam-pomba ary miverimberina matetika eo amin’ny fifandraisantsika. Miala tsiny toy izany isika, matetika tsy am-piheverana akory, noho ny fahadisoana nataontsika tamin’ny hafa, ka manamaivana ny lanjan’izany, ary amin’ny ankapobeny dia zara raha miraharaha izay valiny. Saingy tsy afaka ho toy izany mihitsy eo amin’ny fifandraisana amin’Andriamanitra.
Izao tontolo izao dia feno olona mihevi-tena ho tsy manan-tsiny, na raha manana aza, dia bitika kely monja! Nefa tsy mba toy izany ny fahitan’Andriamanitra ny zava-misy: “Tsy misy marina na dia iray akory aza” (Romana 3:10). Na izany aza, dia niteny Jesosy hoe: “Tsy avy hiantso ny marina Aho, fa ny mpanota mba hibebaka” (Lioka 5:32). Koa ny dingana voalohany tsy maintsy ataoko mba handraisana ny famelan-keloka avy amin’Andriamanitra, dia ny miaiky fa izaho koa dia tsy marina, mpanota, meloka ary mendrika ilay didim-pitsarana notononiny hoe: “Fahafatesana no tambin’ny ota” (Romana 6:23). Ambaran’i Jesosy amiko koa fa ho ahy, mba hanafaka ahy amin’ny fahotako, no nahatongavany tety; an-tany sy niaretany ny fahafatesana teo amin’ny hazofijaliana, ary nitondrany tamin’ny tenany ny famaizana sahaza ahy. “Izy nitondra ny fahotantsika tamin’ny tenany teo ambonin’ny hazo (ny hazofijaliana)” (1 Petera 2:24). Koa raisiko izany famelan-keloka nomanin’Andriamanitra ho an’izay rehetra mino an’i Jesosy Kristy izany, miaraka amin’ny fiadanam-po sy fifaliana aterany.
Araka izany, ny hoe famelan-keloka omen’Andriamanitra dia tsy fomba fiteny fotsiny. Efa nefain’i Jesosy Kristy ny sandany, mba hahazoany manolotra izany amiko, noho ny fitiavany ahy. Ho anao koa izany famelan-keloka maimaimpoana izany.